नेपाल आज | गुठीमा देखियो होली वाईनको प्रभाव (भिडियोसहित)
सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । काठमाडौंका नेवार समुदायदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाज विधेयकको विरोधमा छन् । विधेयकको विरोध यसरी भैरहेको छ कि यसले सरकार नै ढल्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।
सत्तारुढ दल भित्रकै नेताहरु विधेयकको पक्ष विपक्षमा बाँडिएपछि सरकार र सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टी नेकपा संकटमा परेको छ । अझ सरकारका प्रवक्ता, सूचना एवं संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठीलाई सामन्तवादीको स्वरुप भनेपछि गुठियारहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।
गुठी सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध संघर्ष गर्न राप्रपा संयुक्तले त समिति नै बनाएको छ । नेता राजाराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले विधेयक फिर्ता गराउन सडक संघर्ष गर्नेसम्मका कार्यक्रम गर्ने प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।
गुरुङले भने, ‘गुठी विधेयक ल्याउनु पछाडि ठूलो षड्यन्त्र छ । यो नेपालको परम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज तथा अस्तित्व नै समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट आएको छ । विशेषतः युरोपियनहरुले यसमा खेलिरहेका छन् । युरोपियनहरुको डिजाइनमा सरकार परेको छ । हिजो होली वाइन खाएर मुलुकको धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोल्नेहरुले नै आज गुठी सिध्याउन खोज्दैछन् । यो मुलुकमाथिको आक्रमण हो, त्यसकारण हामी विरोधमा उत्रिनु वाध्यता भयो । ’
‘केही नेताहरु विधेयकको पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुको सत्तापक्षसंगको सम्बन्धले त्यो अवस्था आएको होला । तर, मुलुकमाथि संकट आएकोबेला दलिय सम्बन्ध विग्रने चिन्ता पाल्नु हुँदैन । मुलुक जोगिए हामी रहने हो, हाम्रा अडान रहन्छन् । विधेयक सरसर गलत छ, यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन । ’ प्रवक्ता गुरुङले भने ।
नेता गुरुङका अनुसार सरकार एकपछि अर्को गदैै विवादमा फसेको छ । सुरक्षा, शिक्षा, संचार, मानवअधिकार कुन क्षेत्रका मानिस यो सरकारसंग सन्तुष्ट छन् । सबै आन्दोलनमा छन् । हुँदाहुँदा लोकसेवा आयोगलाई पनि गिजोल्न खोज्दैछ । सरकारले एउटा काम गर्ने, राज्य व्यवस्था समितिमा उसकै सांसदले अर्कोथरी निर्देशन दिने, यस्तो पनि हुन्छ ? नेकपा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेर मुलुक कब्जाको अभियानमा लागेको छ ।
संसदीय समितिमार्फत करारमा कर्मचारी राख भनेर निर्देशन दिनुको कारण के हो ? करारका नाममा अरिङ्गाल भर्ना गर्न खोज्ने ? सरकार गलत बाटोमा छ, दिनगन्ति सुरु भैसकेको छ । नेता गुरुङले अमेरिका र युरोपियनहरुको हस्तक्षेप मुलुकमा बढ्दै जाँदासमेत सरकार मौन रहेकोमा आश्चार्य प्रकट गरे । खासगरी नेपाल इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको सदस्य भैसकेपछि अमेरिकन प्रभाव झन बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘एउटा अमेरिकन मन्त्री आउँछ र नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको जिम्मा हाम्रो हो भन्छ, सरकार चुपचाप बस्छ । को हो यो भनेको ? अमेरिकी मन्त्रीले भने जस्तै नेपालको सार्वभौमिकता संकटमा परेको हो त ? सरकार किन बोल्दैन ? यो भनेको विदेशीसामु आत्मसमर्पण गरेको होइन ? ’
नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, अक्षुणता र परम्परागत मूल्य मान्यता कम्युनिष्ट सरकारका कारण तहसनहस हुने स्थिति आयो । अब यसबाट मुलुकलाई जोगाउन संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ । सकभर दलीय सहमति नभए आन्दोलनबाटै भएपनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न जरुरी छ । यो काम हामी गर्छौं, सबैले ढुक्क भए हुन्छ ।
गुरुङ भन्छन्, ‘यो देशमा पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा र राजा महेन्द्रको जस्तो नेतृत्व चाहिएको छ । जबसम्म राष्ट्रिय एकताको भावना भएका पृथ्वीनारायण, गुमेको मुलुक फिर्ता गराउन सक्ने कौशलता भएका जंगबहादुर र मुलुकको विकासका लागि देश विदेशमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने महेन्द्र राजा जस्तो नेतृत्व आउँदैन, तबसम्म हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल बनाउन निकै समय लाग्ने छ । ’
‘हाम्रा अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल छ । पशुपति प्रधानमन्त्री बने यी दलहरुले भन्दा मुलुकको अवस्था धेरै राम्रो बनाएर हामी देखाइदिन्छौं । जहाँसम्म राजसंस्था फर्काउने कुरा छ, त्यसमा त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नै फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’ गुरुङले बताए ।